Best imoto Business inground lift series series L7800 yoMvelisi kunye Factory | IsiTonghe
Imoto eshishini ngaphakathi yokuphakamisa uthotho lwe-L7800
I-LUXMAIN imoto yeshishini yokunyusa ngaphakathi yenza uluhlu lweemveliso ezisemgangathweni kunye neemveliso ezingezizo ezomgangatho. Ingakumbi isebenza iimoto abakhweli kunye neelori. Ezona ndlela ziphambili zokuphakamisa iilori kunye neelori ngaphambili nangasemva ukwahlula-hlula uhlobo lweposti ezimbini nangaphambili kunye nangasemva ukwahlula uhlobo lwezithuba ezine. Usebenzisa ulawulo lwePLC, inokusebenzisa indibaniselwano yolungelelwaniso lwe-hydraulic + ungqamaniso oluqinileyo.
Izixhobo zenziwe njengekholamu ezimbini zangaphambili kunye nohlobo lokwahlula ngasemva. Enye yeekholamu zokuphakamisa inokuhamba phambili nangasemva. Ixhotywe yipleyiti yokulandelela yokuthwala umthwalo, enokuthi ikhawuleze igubungele umhlaba. Umhlaba ukhuselekile kwaye mhle, kwaye unokumelana nabasebenzi okanye izithuthi eziphakanyiswayo. Izithuthi zohlobo olufanayo zidlula ngokukhuselekileyo kwiipleyiti zetyathanga.
Izixhobo zamkela ulawulo lwe-PLC kwaye ziqhuba ngombane ngesithuba sokuphakamisa ukuya ngapha nangapha, ukuchongwa kwexesha lokwenyani ledatha ehlaziyiweyo, ukuqinisekisa ukuba ezi zithuba zimbini zokuphakamisa zigcinwa kulungelelwaniso lwangempela. Kwangelo xesha, ukusilela kwezixhobo kuya kuboniswa kwangoko, kukhumbuza umqhubi ukuba ahlengahlengise kwaye agcine.
Isixhobo sinokulawulwa ngeendlela ezimbini, isikrini sokuchukumisa kunye nomqheba wolawulo kude.
Xa kufuneka kulungelelaniswe indawo yokunyusa, isiphatho sesilawuli kude kufuneka sisetyenziselwe ukulawulwa okubonakalayo okukuko, okuchanekileyo nokukhuselekileyo. Isithuthi singena kwisikhululo sokunyusa kwaye siqinisekisa ukuba indawo yokunyusa ihambelana nekholamu emiselweyo yokunyusa. Cinezela isiphatho sesilawuli kude. "Yiya phambili" okanye "Buyela umva" iqhosha lokutshintsha ubume bekholamu yokuhamba kwaye ungqamane nendawo yokuphakamisa kwelinye icala lesithuthi. Lungisa iikholamu ezimbini zokunyusa inyathelo ngenyathelo ukunyuka kuqala emva koko, kufutshane neendawo zokuphakamisa isithuthi ngokwahlukeneyo, emva koko usebenzise iqhosha "lokuphakamisa" ukuphakamisa isithuthi.
Izixhobo zixhotyiswe ngenkqubo yokutshixa ngomatshini yangaphandle, enokuqinisekisa ngokubonakalayo ukuba isixhobo sitshixiwe okanye asitshixwanga. Isitshixo sokutshixa ngomatshini sisebenza njengenkxaso encedisayo ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nozinzo lwezixhobo.
Isixhobo sokujija i-hydraulic sixhotyiswe kwisilinda, esinganikezeli kuphela isantya sokunyuka ngokukhawuleza ngaphakathi kwesisindo sokuphakamisa esisetwe zizixhobo, kodwa ikwaqinisekisa ukuba ilifti izakwehla kancinci ukunqanda iimeko ezigwenxa ezinje ngokusilela kokutshixa koomatshini okanye isiphumo sokuqhekeka kwemibhobho. kwingozi yokhuseleko yabangelwa kukuwa ngokukhawuleza nangokukhawuleza.
Ilungele iimodeli ezahlukeneyo zeemitha ezi-8 ukuya kwezi-12 ezinde.
Ubukhulu. Ukuphakamisa amandla 16000kg
Layisha ukungalingani ubuninzi be-6: 2 (itheko ngaphambili nangasemva kwesithuthi)
Ubukhulu. Ukuphakamisa ubude I-1800mm
Ubungakanani becala lokusingathwa kwecala L2800mm x W1200mm x H1600mm
Ubungakanani bomgcini wecala elicwangcisiweyo L1200mm x W1200mm x H1600mm
Ukuphakamisa indawo yokuposa Min. 4450mm, uMax. I-6050mm, iyahlengahlengisa ngokungakhathali
Ixesha elipheleleyo lokuphakamisa (ukuwa) Ngama-60-80s
Umbane wamandla AC380V / 50 Hz
Amandla emoto 3 kw / 3kw
Egqithileyo L-E60 Series New imoto yesithuthi ibhetri lift itroli
Okulandelayo: Elungiselelweyo inground lift series
Ukuphakama kweemoto eziphakathi
Ukuphakama kweMoto yokuHlamba iMoto
Iposi enye yokuPhakamisa indawo
Iposti enye engokuphakanyiswa komhlaba
Elungiselelweyo inground lift series
Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Isilinda esibambeleyo esinye, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo,